Farriinta Daljir: “Guri kasta geed ku beer oo qarax ha beerin!” (dhegayso) – Radio Daljir
Luulyo 19, 2019 3:24 g 0
Maxaa hoggaanka, culimada iyo masuuliyiinta Puntland iyo dhammaan kuwo Soomaaliyeed ka indhatiray in ay beeraan oo haddana boorriyaan in jid kasta iyo guri kasta geedo lagu beero? Maxaa weli hortaagan oo aysan fahmin? Maxay se adiga kula tahay?
MUWAADIN GURI KASTA LABA GEED KU BEER!